“မြို့တစ်မြို့ သုံးနိုင်ငံဆက်ထား” နယ်စပ်မြို့၏ သစ်သွင်ပြင်
2019-07-24 13:00 source：
Luo Fa Xiang မှ နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေးလက်မှတ်အား ထုတ်ဖော်ပြသ။
Photo Credit – Chen Hao (People’s Daily Online)
ယူနန်ပြည်နယ် Jiang Cheng ဟားနီတိုင်းရင်းသား၊ ယိတိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင် ခရိုင် မြို့မှနေပြီး တောတွင်းလမ်းသွယ်လေးအတိုင်း အရှေ့မြောက်ဖက်သို့ တစ်နာရီဝန်းကျင် ခရီးနှင်ပါက တောင်စောင့်နတ်နန်းတောင်ကြားလမ်းတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာအား ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ တောင်ကြားလမ်းမှ အဝေးသို့လှမ်းမျှော်ပါက Jiang Cheng ခရိုင်မြို့အား တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်ဖက်သို့ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးလာသော ကူမင်တန်စစ်တပ်သည် Jiang Cheng ခရိုင်မြို့သို့ ဦးတည်ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် Jiang Cheng ခရိုင်ယာယီအစိုးရ သည် ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းကာ တောင်စောင့်နတ်နန်းတောင်ကြားလမ်းတွင် ကူမင်တန်စစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲအား ယူနန်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးသမိုင်းမှ မေ့ပျောက်၍မရပေ။
အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အဘိုးအို Chen Wen Chang သည် တိုက်ပွဲအကြောင်းအား သူ၏ သားသမီးအား အမြဲတစေ ပြောပြလေ့ရှိသည်။ “နယ်စပ်မှာမွေးရင် နယ်စပ်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမယ်။ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်” ဟု တိုက်ပွဲအကြောင်း ပြောပြီးတိုင်း အထက်ပါစကားအား အဘိုးအို Chen Wen Chang မှ အမြဲတစေ ပြောလေ့ရှိသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မည်နည်း? Jiang Cheng ခရိုင်သည် လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့နှင့် နယ်မြေချင်းထိစပ်လျက်ရှိပြီး “နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအား ဆက်သွယ်ထားသည့်မြို့လေးတစ်မြို့” ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တိုင်းရင်သားအရေအတွက် များပြားခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်ရှိခြင်း စသည်တို့သည် Jiang Cheng ၏ အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်သည်။
Jiang Cheng သည် “ပထဝီတည်နေရာအားသာချက်” အားအသုံးချကာ ခရိုင်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်း ၂၅ မျိုး၊ လူဦးရေပေါင်း ၁၂၀၀၀၀ ကျော်အား ကောင်းမွန်သည့်လူနေမှုဘဝ ရရှိစေရန် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မည်နည်း? ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အလွန်အမင်းဆင်းရဲသော ခရိုင် ၂၇ ခု အနက် တစ်ခုဖြစ်သော Jiang Cheng ခရိုင်သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း နိုင်ငံတော်၏ ဆင်းရဲမှု တိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒ လမ်းညွှန်မှုအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ကာ လက်ရှိအချိန်တွင် Jiang Cheng ခရိုင် သည် အသွင်အပြင်သစ်များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးစပြုပြီဖြစ်သည်။
စျေးနေ့ရောက်တိုင်း Long Fu လမ်းမတွင် လူအသွားအလာ အလွန်များပြားသည်။
Photo Credit – Cheng Hao (People’s Daily News)
နယ်စပ်ဒေသဖြစ်သည့်အလျောက် နယ်စပ်ဂိတ်အား အမှီပြုကာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်။
ဇူလိုင် ၁၃ ရက် တရုတ်-ဗီယက်နမ် Long Fu နယ်စပ်လျှောက်လမ်း နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေး စျေးနေ့သည် အလွန်ပင်စည်းကားလျက်ရှိသည်။ လမ်းမပေါ်တွင် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ရာနှင့်ချီရှိပြီး ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသားများသည် စျေးတွင်ရောင်းချလျက်ရှိသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဝက်သား၊ Egg၊ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ အား အလုအယက် ဝယ်ယူလျက်ရှိသည်။ အသက် ၅၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် Dao Hua Bin သည် သူ၏ တစ်နေ့တာဝင်ငွေအား တွက်ချက်လျက်ရှိသည်။ သူ၏ဇနီးမှ “ဘယ်လောက်ရလဲ?” ဟုမေးမြန်းရာ Dao Hua Bin မှ “မဆိုးပါဘူး” ဟု ပြုံးပျော်ကာ ပြန်လည်ဖြေကြားလေသည်။
Long Fu နယ်စပ်လျှောက်လမ်းသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Dian Bian ပြည်နယ် Meng Nian ခရိုင် Qing Tou ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်လျက်ရှိသည်။ တရုတ်-ဗီယက်နမ် နယ်စပ်မှတ်တိုင် အမှတ် (၃) သည် ဤအနီးတစ်ဝိုက်တွင် တည်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာက တရုတ်-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံမှ နယ်စပ်ပြည်သူများသည် ဤနေရာတွင် အရောင်းအဝယ် အနည်အကျဉ်း ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လမှစတင်ကာ လတစ်လ၏ ၃ ရက်နေ့၊ ၁၃ ရက်နေ့၊ ၂၃ ရက် နေ့အား Long Fu နယ်စပ်လျှောက်လမ်း နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေးစျေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစတင်ကာ Jiang Cheng ခရိုင် Guo Qing ကျေးရွာအုပ်စုတွင် နေထိုင်သည့် Dao Hua Bin သည် ဤနေရာတွင် ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းကာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအပြင် ဟားနီတိုင်းရင်းသား ရိုးရာ အစားအစာအား ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ “တစ်လကို ယွမ် ၄၀၀၀၊ ၅၀၀၀ ဝန်းကျင်ရတယ်။ အရင်က ခြံစိုက်တာထက်စာရင် အများကြီးကောင်းပါတယ်!”
ကိန်းဂဏာန်းအချက်အလက်များအရ Long Fu နယ်စပ်လျှောက်လမ်း နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေး စျေးနေ့တစ်နေ့၏ ပျမ်းမျှလာရောက်သည့် လူအရေအတွက်မှာ ၅၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး ပျမ်းမျှ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ ယွမ် ၄ သိန်း ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Long Fu နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေး ပမာဏမှာ ယွမ် ၈.၅၅ သန်းဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုပမာဏမှာ ၃၄၆၃ တန်ရှိသည်။
အထက်ပါ ကိန်းဂဏာန်းများသည် အလွန်အားရဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော် Meng Kang နယ်စပ်ဂိတ် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်နည်းပါးလျက်ရှိသည်။ Meng Kang နယ်စပ်ဂိတ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမ အဆင့် နယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်ပြီး လာအိုနိုင်ငံ Feng Sha Li ပြည်နယ် Yue Wu မြို့နယ် Xiao Zhai ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် နယ်မြေချင်းထိစပ်လျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မေလအတွင်း Meng Kang နယ်စပ်ဂိတ် နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်စီးဆင်းမှုပမာဏမှာ ၃၉၉၃၇.၄၁၂ တန်ရှိပြီး ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးမှာ တရုတ်ယွမ် သန်း ၁၅၀ ကျော်ရှိသည်။
Jiang Cheng ခရိုင် Kang Ping မြို့နယ် Meng Kang ကျေးရွာသည် နယ်စပ်ဂိတ်နှင့် ၁၀ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးပြီး လူဦးရေ ၄၀၀၀ ကျော်နေထိုင်သည်။ လူဦးရေ၏ ၈၀% သည် နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေး အား အမှီပြုကာ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ကြသည်။ ရွာသူရွာသားများသည် ရာသီပေါ်မူတည်ပြီး နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့မဟုတ် မှို သို့မဟုတ် ဆန်စပါး ရောင်းချသည်။ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ ယွမ်ထောင်ချီ တိုးမြှင့်စေရန်မှာ ခက်ခဲသည့်အရာ မဟုတ်ပေ။
အသက် ၅၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် Luo Fa Xiang သည် နယ်စပ်ဒေသတွင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကာလတွင် နွားအရောင်းအဝယ်လုပ်ကာ လာအိုနိုင်ငံမှ နွားများအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းရောင်းချသည်။ နွားတစ်ကောင်လျှင် ယွမ် ၅၀၀၊ ၆၀၀ မြတ်စွန်း သည်။ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုစနစ်ကျလာသည့်နှင့်အမျှ Luo Fa Xiang သည် ဝက်အစာရောင်းဝယ်ရေး အား ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လာအိုနိုင်ငံသို့ ဝက်အစာတင်ပို့သည်။ “တစ်အိတ်ကို ၂၀ ကီလိုပါတယ်။ တစ်အိတ်ကို ၁၀ ယွမ်ကျော် မြတ်ပါတယ်။ တစ်လလုံးအနေနဲ့ ယွမ် ၄၀၀၀၊ ၅၀၀၀ မြတ်ပါတယ်” Luo Fa Xaing သည် အလွန်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိသည်။ “အိမ်မှာ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ ပေါင်းလိုက်ရင် တစ်လကို ယွမ် ၇၀၀၀၊ ၈၀၀၀ လောက်မြတ်ပါတယ်။”
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်မှစတင်ကာ အကြီဆုံးသားဖြစ်သည့် Luo Da Shun သည် ကျောင်းပညာ ပြီးဆုံးပြီးနောက် သူ၏ဖခင်နှင့်အတူ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒအရ နယ်စပ်ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီသည် နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့် တစ်နေ့လျှင် ယွမ် ၈၀၀၀ ထက်မပိုသော ကုန်ပစ္စည်းများအား သွင်းကုန်အခွန် သို့မဟုတ် သွင်းကုန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခွန် ပေးဆောင်ရန်မလိုပဲ တင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်မူဝါဒ၏ ကျေးဇူးကြောင့် Luo Fa Xiang ၏ မိသားစုလုပ်ငန်းမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်။
Meng Kang နယ်စပ်ဂိတ် နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေးအား ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ရွာသူရွာသားများသည် နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့် ဝင်ငွေများ တိုးတက်ရရှိလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Meng Kang လယ်ယာထွက်ကုန် ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက် တည်ဆောက်ပြီးနောက်တွင် အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေစျေးနေ့တွင် စျေးဝယ်လာသူအရေအတွက်မှာ ထောင်ဂဏာန်းဝန်းကျင်ရှိပြီး အရောင်းအဝယ်ပမာဏမှာ ယွမ် ၁ သိန်းကျော်ရှိသည်။
Meng Kang နယ်စပ်ဂိတ်နှင့် Long Fu နယ်စပ်လျှောက်လမ်းအပြင် ယူနန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် Jiang Cheng ခရိုင်သည် လာအို၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့နှင့် ထိစပ်နေသည့် နယ်နိမိတ်မျဉ်း အရှည်မှာ ၁၈၃ ကီလိုမီတာရှိသည်။ Jiang Cheng ခရိုင်သည် ယူနန်ပြည်နယ်တွင် လာအို၊ ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် ထိစပ်နေသည့် တစ်ခုတည်းသောခရိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Jiang Cheng ခရိုင်တွင် တရုတ်-လာအို Niu Luo He နယ်စပ်လျှောက်လမ်း၊ တရုတ်-လာအို Man Tang နယ်စပ်လျှောက်လမ်း စသည့် အခြားနယ်စပ်လျှောက်လမ်းနှစ်ခုတည်ရှိသည်။
Jiang Cheng ခရိုင်အနေဖြင့် “နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအား ချိတ်ဆက်ခြင်း” ပထဝီတည်နေရာ အားသာချက်အား အသုံးချကာ ကာလကြာရှည်တည်ရှိခဲ့သည့် တောင်ပေါ်ဒေသ တံခါးပိတ်အတွေးအခေါ်အား ဖယ်ရှားပြီး “နယ်စပ်ဂိတ်ခရိုင်” တည်ဆောက်ခြင်းအား ခရိုင်၏ အဓိက ဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့နှင့် စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ပိုမိုအလေးထား ဆောင်ရွက်ကာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်စီးပွားရေးအား အမှီပြုသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းစဉ်အား လျှောက်လှမ်းမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ Jiang Cheng ခရိုင်တွင် ပိုမိုများပြားသည့် နယ်စပ်ပြည်သူများသည် နယ်စပ်ပြည်သူကုန်သွယ်ရေး တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ Jiang Cheng ခရိုင်တွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် အစီအစဉ်ရှိသည်။ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းခြင်းမှတစ်ဆင့် Jiang Cheng ခရိုင်၏ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုန်စည် စီးဆင်းမှု၊ ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး တွင် နယ်စပ်ပြည်သူများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီး၊ နိုင်ငံတော်အတွက် ဘဏ္ဍာအခွန် ပိုမိုရရှိစေမည့် ရည်းမှန်းချက်အား ပြည့်မြောက်စေမည်ဖြစ်သည်။
Man Tang ကျေးရွာကော်မတီ၏ “ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ သင့်လျော်ရာအရပ်သို့
ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခြင်း” တည်နေရာအသစ်ဖြစ်သည့် Lao Wu Liang အရပ်ဒေသ။
တောတောင်အားအမှီပြုကာ တည်ဆောက်ထားသည့် အဖြူရောင်လူနေအိမ်များမှာ အလွန်ပင်ထင်သာမြင်သာရှိသည်။ Photo Credit – Chen Hao (People’s Daily News)
အိုဟောင်းသည့် လူနေအိမ်မှသည် သစ်လွင်သည့် လူနေအိမ်သို့ “လူနေမှုဘဝမှာ ယခုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သင့် သည်”
Jiang Cheng ခရိုင် Zheng Dong မြို့နယ် Man Tang ကျေးရွာကော်မတီ၏ “ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ သင့်လျော်ရာအရပ်သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခြင်း” တည်နေရာအသစ်ဖြစ်သည့် Lao Wu Liang အရပ် ဒေသ။ တောတောင်အားအမှီပြုကာ တည်ဆောက်ထားသည့် အဖြူရောင်လူနေအိမ်များမှာ အလွန်ပင်ထင်သာမြင်သာရှိသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Cai Wen Zhong နှင့် သူ၏မိတ်ဆွေသည် အိမ်အသစ်ရှေ့တွင်ထိုင်ကာ ကိုယ်တိုင် စိုက်ထားသည့် လက်ဖက်အား သောက်သုံးကာ စကားစမြည်း ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။ ယခင် နေထိုင်ခဲ့သည့် နေအိမ်အဟောင်းတွင် Cai Wen Zhong တို့သည် ယခုကဲ့သို့ သက်တောင့်သက်သာ နေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
“တစ်သက်လုံးနေလာတဲ့ အိမ်အဟောင်းက တစ်အိမ်လုံး မဲမှောင်နေတာပဲ။ မိုးရွာတဲ့နေ့တွေဆို အိမ်ထဲမှာ မိုးယိုတယ်။ အိမ်ပြင်ထွက်ရင်လည်း ရွံ့တွေချည်းပဲ” ဟု Cai Wen Zhong မှ ပြန်လည်အမှတ်ရ ပြောကြားသည်။
“အဲ့ဒါတွေတင်မကဘူး။ ရွာထဲကို တောဆင်ရိုင်းတွေ မကြာခဏလာတယ်။ တောဆင်ရိုင်းတွေက နေ့ခင်းဖက်မလာဘူး၊ ညကျမှလာတာ။ သူတို့တွေလာရင် စိုက်ထားထဲ့ ပြောင်းခင်းတွေ၊ ငှက်ပျောပင် တွေ အကုန်ဖျက်ဆီးခဲ့တာ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ရလပိုင်း၊ ၈လပိုင်းလောက်တုန်းက အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ဝက်တစ် ကောင် တောဆင်ရိုင်းနင်းလို့ သေသွားတာ။ အကယ်၍ အဲ့နေရာမှာ ဝက်မဟုတ်ပဲ လူသာဆိုရင် မတွေးဝံ့ စရာပဲ။” ဟူ၍ Cai Wen Zhong ၏ မိတ်ဆွေဖြစ်သည့် Zhu Zhi Xiang မှ အတိတ်မှအဖြစ်အပျက်အား ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရ ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ် ဧပြီလတွင် Man Tang ကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စု ၉၇ စုသည် ၁၅ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည့် “ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ သင့်လျော်ရာအရပ်သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခြင်း” တည်နေရာအသစ်ဖြစ်သည့် Lao Wu Liang အရပ်ဒေသတွင် ဘဝသစ်အား စတင်ခဲ့သည်။
အိမ်သစ်သို့ ပြောင်းရွေ့လာပြီးနောက် Cai Wen Zhong သည် သူ၏ ၇၅ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသည့် အိမ်သစ်တွင် ယပ်တောင်၊ Bonsai အပင်ငယ်၊ ကော်ဇောတို့ဖြင့် သေသပ်စွာ ခင်းကျင်းပြင်ဆင်သည်။ “အိမ်ကအရမ်းကောင်းတာ၊ မခင်းကျင်းလို့ မရဘူးလေ” ဟု Cai Wen Zhong မှ ရယ်မောကာ ပြောဆိုလေ သည်။ ခြံအတွင်းစိုက်ထားသည့် ပြောင်းမှာ လူအရပ်တစ်ဝက်ကျော် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၄ မူ၊ ၅ မူ ကျယ်ဝန်း သည့် လက်ဖက်စိုက်ခင်းမှာလည်း နောက်နှစ်တွင် စတင်ခူးဆွတ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သားသမီး နှစ်ယောက်မှာလည်း ငွေရှာနေပြီဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာများအား စဉ်းစားရင်း သာယာလှပသည့် လူနေမှုဘဝမှာ လက်တစ်ကမ်းတွင် ရောက်ရှိနေပြီဟု Cai Wen Zhong မှ ယူဆလေသည်။
နေအိမ်အသစ်သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သည့် ရွာသူရွာသားများ လျင်မြန်စွာ အထိုင်ကျစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘက်စုံလှုပ်ရှားမှုရင်ပြင်၊ ဆေးပေးခန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုခန်းမ တို့မှာ တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်သည်။ ညစာစားပြီးနောက် မြူးကြွသောတေးဂီတများ ပျံ့လွှင့်လာခဲ့သည်။ ဘက်စုံလှုပ်ရှားမှုရင်ပြင် တွင် လူများဖြင့်စည်းကားလျက်ရှိပြီး အသက်အရွယ်ပေါင်းစုံလူအများသည် ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်လျက်ရှိ သည်။ အရှက်အကြောက်ကြီးသည့် Cai Wen Zhong မှာလည်း ကခုန်သည့်အဖွဲ့သို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ “လူနေမှုဘဝမှာ ယခုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သင့်သည်။” ဟု Cai Wen Zhong မှ ခံစားချက်အပြည့်ဖြင့် ပြောကြား လေသည်။
“လူနေအိမ်အဟောင်းမှသည် လူနေအိမ်အသစ်သို့ ပြောင်းရွေ့ရာတွင် နေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲ ရုံသာမက၊ လူအများ၏ စိတ်ခံစားမှုမှာလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ “Jiang Cheng ခရိုင်အစိုးရ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းမှ မိတ်ဆက်ပြောကြေားရာတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ခရိုင်တစ်ခုလုံး တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်မိသားစု လူဦးရေ စုစုပါင်း ၉၃၇၈ ဦးအား ပြောင်းရွေ့ပေးခဲ့သည်။ ပြောင်းရွေ့ စခန်းပေါင်း ၇၆ ခု အသစ်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နေအိမ်အသစ်ပေါင်း ၂၇၈၂ အိမ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပြောင်းရွေ့စခန်း ၇၆ ခု၏ ကားလမ်း၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ အများသုံးသန့်စင်ခန်း၊ အမှိုက်ကန် စသည်တို့အား တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပမာဏမှာ ယွမ် ၂၉၇ သန်းဖြစ်သည်။
ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ရုံသာမက အတည်တကျနေထိုင်နိုင်ရန်န်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် Jiang Cheng ခရိုင်အစိုးရသည် နည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ လုပ်သား ပြောင်းရွေ့ခြင်း၊ လူထုအကျိုးပြု အလုပ်နေရာခန့်အပ်ခြင်း စသည့်ပုံစံဖြင့် ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ၏ ဝင်ငွေဖွဲ့စည်းပုံစနစ်အား ပိုမိုပြည့်စုံစေကာ ဝင်ငွေအရည်အသွေးအား မြှင့်တင် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘလတွင် Luo Yu Shi သည် Qu Shui မြို့နယ် Ba Shan ကျေးရွာ Guo Men ကျေးရွာခွဲ ပြောင်းရွေ့စခန်းသို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပြီး စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉၀ ရှိသည့် အိမ်အသစ်သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင် ခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးအားလပ်ချိန်တွင် ကျေးရွာအခြေစိုက်ဝန်ထမ်းသည် Luo Yu Shi အတွက် အချိန်ပိုင်း အလုပ်အား ကူညီရှာဖွေပေးလျက်ရှိသည်။ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ငှက်ပျောစိုက်ပျိုးသူတစ်ဦးမှ အလုပ်သမား ခေါ်ယူနေသည့်အတွက် Luo Yu Shi နှင့် သူမ၏ချွေးမသည် သွားရောက်လုပ်ကိုင်သည်။ တစ်ဦးလျှင် တစ်နေ့ ယွမ် ၁၀၀ ရရှိသည်။ “အိမ်နဲ့နီးတယ်၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင် ခဏလေးရောက်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်ကိုလည်း မလစ်ဟင်းစေဘူး” ဟု Luo Yu Shi မှ ကျေနပ်စွာပြောကြားလေသည်။
Cai Wen Zhong ၏ လူနေမှုဘဝမှာ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ကျေးရွာအခြေစိုက်ဝန်ထမ်း၏ မိတ်ဆက်ရှာဖွေပေးမှုဖြင့် သူ၏သားသမီးနှစ်ယောက်သည် အလုပ်ထွက်လုပ်ကြလေသည်။ “အိမ်ကို ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်ရပြီ” ဟု ရယ်မောစွာပြောကြားလေသည်။
Liu Hai Ying မှ ရာဘာစေးခြစ်နည်းအား ပြသစဉ်။
Photo Credit – Chen Hao (People’s Daily News)
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသည် ပြည်သူများ၏ ဝင်ငွေအား တိုးပွားစေသည်။ “လက်ကျန်ဘဝအတွက် အာမခံချက်ရှိပြီ။”
ညဉ့်သန်းခေါင်ယံ ၁၂ နာရီကျော်ချိန်တွင် မိုးကောင်းကင်မှာ မဲမှောင်လျက်ရှိသည်။ ဟားနီတိုင်းရင်းသူ Liu Hai Ying နှင့် သူမ၏ခင်ပွန်းသည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၃ ကီလိုမီတာဝေးသည့် ရာဘာစိုက်ခင်းသို့ ဦးတည် ထွက်ခွာလေသည်။
ဤရာဘာစိုက်ခင်းအား ရာဘာစေးခြစ်ရန် Liu Hai Ying တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သည် အချိန် ၃ ရက် လိုအပ်သည်။ ၃ ရက်လျှင်တစ်ကြိမ် ထပ်ခြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလထိတိုင် ရာဘာခြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤရာဘာစိုက်ခင်းအား ယူနန်သဘာဝရာဘာလုပ်ငန်းအုပ်စု Jiang Cheng Co., Ltd. မှ ပိုင်ဆိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က အစိုးရ၏ အားပေးမှုဖြင့် Liu Hai Ying တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သည် ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး မူ ၁၀၀ ကျယ်ဝန်းသည့် ရာဘာစိုက်ခင်းအား တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဧပြီလ၊ မေလမှ နိုဝင်ဘာလကြားသည် ရာဘာခြစ်သည့်ကာလဖြစ်သည်။ Liu Hai Ying တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သည် သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် ရာဘာစတင်ခြစ်ပြီး မိုးမလင်းမီ ပြီးဆုံးအောင် ခြစ်ရသည်။ ထို့နောက် ခဏတာ အိမ်ပြန်အနားယူသည်။ အနားယူပြီးနောက် ပလပ်စတစ်ပုံ၊ ရာဘာ ခြစ်တံတို့ ယူဆောင်ကာ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်အား မောင်းနှင်ပြီး ရာဘာစိုက်ခင်းသို့ပြန်လာကာ ရာဘာစေး စုသည်။ စုဆောင်းရရှိသည့် ရာဘာစေးအား ကုမ္ပဏီ၏ အမှတ် (၁၃) ကားအဖွဲ့ထံ အပ်နှံသည်။ အထက်ပါအလုပ်များအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက နေ့လည် ၁၂ နာရီကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုအလုပ်မှ တစ်လလျှင် ယွမ် ၆၀၀၀၊ ၇၀၀၀ ဝန်းကျင်ရရှိပြီး တစ်အိမ်လုံး၏ အဓိကဝင်ငွေဖြစ်သည်။
၁၀ မိနစ်အကြာတွင် ရာဘာစိုက်ခင်းသို့ ရောက်ရှိလေသည်။ Liu Hai Ying တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် သည် ခေါင်းတွင်ဓါတ်မီးအားတပ်ဆင်ကာ ရာဘာခြင်းအားကိုယ်စီလွယ်သည်။ ထို့နောက် ကိုယ်နှင့်မခွာ ယူလာသည့် ခြင်ဆေးခွေအား ထွန်းညှိပြီး ရာဘာခြစ်ဓါးအား ကိုင်ဆောင်ကာ ရာဘာခြစ်သည့်လုပ်ငန်း အား စတင်ဆောင်ရွက်လေသည်။
Liu Hai Ying သည် ရာဘာပင်၌ ၄၅ ဒီဂရီစောင်းကာ ရာဘာခြစ်ဓါးဖြင့် ရာဘာပင်အား ခြစ်သည်။ အဖြူရောင်ရာဘာစေးသည် ရာဘာဓါးဖြင့် ခြစ်ထားသည့် မြောင်းအတိုင်းစီးဆင်းကာ အပင်ပေါ်တွင် ချိတ်ထားသည့် ရာဘာခွက်အတွင်း စီးကျသည်။
ရာဘာခြစ်သည့်အလုပ်သည် အတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာဘာပင်အား နက်ရှိုင်းစွာခြစ်မိပါက အပင်၏သက်တမ်းအား တိုတောင်းစေနိုင်သကဲ့သို့ ရာဘာပင်ခြစ်ရာတွင် အနက်မလုံလောက်ပါက လည်း ရာဘာစေးထွက်ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ Liu Hai Ying ၏ ရာဘာခြစ်သည့် အတတ်ပညာသည် ကုမ္ပဏီ တွင် ရက်ပေါင်းများစွာ သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မိမိဘာသာ အကြိမ်ရေများစွာ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ တတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရာဘာလုပ်ငန်းသည် Jiang Cheng ၏ ပင်မလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ Jiang Cheng တွင် ရာဘာစိုက်ခင်း ဧရိယာ မူ ၅ သိန်းရှိသည်။ ယူနန်သဘာဝရာဘာလုပ်ငန်းအုပ်စု Jiang Cheng Co., Ltd သည် Jiang Cheng ရာဘာလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ရာဘာစိုက်ခင်းဧရိယာ မူ ၁၂၃၁၀၀ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရာဘာရောင်းရငွေမှာ ယွမ် သန်းပေါင်း ၃၃၀ ကျော်ရှိသည်။
ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး အလုပ်ရှာဖွေပေးခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့် Liu Hai Ying အပါအဝင် အခြားသော အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၃၈ စုသည် ရာဘာကုမ္ပဏီတွင် ရေရှည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၆၅ စုအား ရာဘာစိုက်ပျိုးရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ကိန်းဂဏာန်း အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ ကုမ္ပဏီ သည် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၃၈ စုအတွက် လစာငွေ ယွမ် ၅.၃၁ သန်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ သည် တောင်သူအိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၁၉၁ စုအား မြေငှားရမ်းခ ယွမ် ၆.၂ သန်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ်များအတွင်း ကုမ္ပဏီသည် ရာဘာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအား အဆင့် မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၊ Jiang Cheng ခရိုင်အစိုးရနှင့် ဒေသခံ ရာဘာစိုက်ပျိုးရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၃ ခုအကြား အကျိုးအမြတ် ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။ အကျိုးအမြတ်ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးငွေ ယွမ် ၄၆.၅ သန်း အား ရာဘာလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း ဒေသခံ အိမ်ထောင်စု ၄၆၅၀ စုအား အကျိုးအမြတ်ချိတ်ဆက်ခြင်းငွေကြေး ယွမ် ၁၆.၇၄ သန်း ပေးအပ်မည် ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အိမ်ထေင်စုများအား တစ်နှစ်လျှင် ဝင်ငွေ ယွမ် ၅၀၀၀ ပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ် သည်။ ယခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ ကုမ္ပဏီသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၃ ခုထံသို့ အကျိုးအမြတ်ချိတ်ဆက်ခြင်းငွေကြေး ယွမ် ၈.၃၇ သန်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး အစီအမံဖြင့် Liu Hai Ying မိသားစုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆင်းရဲမှုမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ “ကုမ္ပဏီရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတတ်ပညာကို ပေါင်းစပ်ပြီး ရာဘာပင် ၄၀ မူ စိုက်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ၃၊ ၄ နှစ်နေရင် ဝင်ငွေရရှိတော့မှာပါ။ ကုမ္ပဏီကနေပြီး ပင်စင်အာမခံ ဝယ်ထားပေးတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျန်ရှိတဲ့ဘဝအတွက် အာမခံချက်ရှိစေပါတယ်။” ၃၊ ၄ နှစ် ကြာ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် မိမိ၏ နှစ်ထပ်အိမ်အားကြည့်ကာ Liu Hai Yng သည် အနာဂတ်အပေါ် အကောင်းမြင်လျက်ရှိသည်။ “နောက် ၂ နှစ်နေရင် အပေါ်ကို နောက်တစ်ထပ်ဆောက်အုံးမယ်” ထိုသို့ ပြောဆိုပြီးနောက် ကျေးလက်တောသူ Liu Hai Ying သည် ရယ်မောလေသည်။
ယူနန်ပြည်နယ် သဘာဝရာဘာလုပ်ငန်းအုပ်စု Jiang Cheng Co., Ltd. ကဲ့သို့ “ကုမ္ပဏီ + အခြေစိုက် စခန်း + အောက်ခြေအဖွဲ့အစည်း + ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်း + တောင်သူ” “မြေငှးရမ်ခြင်း + အတတ်ပညာသင်တန်းပို့ချခြင်း + လုပ်သားခေါ်ယူခြင်း” ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံစံအား လက်ရှိတွင် Jiang Cheng တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ရာဘာစိုက်ခင်း မူ ၅ သိန်းအပြင်၊ Jiang Cheng ခရိုင်သည် သြစတြေးလျအခွံမာသီး မူ ၃ သိန်း၊ လက်ဖက် မူ ၁ သိန်း ၇ သောင်း၊ ငှက်ပျော မူ ၁ သိန်း ၃ သောင်း၊ ကော်ဖီ မူ ၇ သောင်း၊ လိမ္မော် မူ ၄ သောင်း စိုက်ပျိုလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ရာဘာကုန်ချောစက်ရုံ ၃ ရုံ၊ မွေးမြူရေးခြံ ၁၀ ခြံ၊ လက်ဖက်ထုတ်လုပ်ရေးရုံ ၁၂ ရုံ၊ ဆင်းရဲမှု တိုက်ဖျက်ရေးအလုပ်ရုံ ၁၈ ရုံ တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သည်။ ခရိုင်အတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ကျေးရွာ ပေါင်း ၄၂ ရွာ၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၉၆၁၃ စု၊ လူဦးရေပေါင်း ၃၆၅၃၄ ဦးအား ရာဘာ၊ လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ အခွံမာသီး၊ ငှက်ပျော၊ လိမ္မော်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် နွားမွေးမြူခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်စေပြီး ရွာသူရွာသားများအတွက် တည်ငြိမ်သည့်ဝင်ငွေအား ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့သည်။
Jiang Cheng ခရိုင် ဒုခရိုင်မှူး Ma Ru Qing မှ ပြောကြားရာတွင် “Jiang Cheng သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ယူနန် ပြည်နယ်အတွင်း ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး အဓိကဆောင်ရွက်မည့် ခရိုင် ၃၁ ခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်တိုတောင်းပြီး၊ တာဝန်မှာကြီးလေသည်။ လက်ကျန်ဒေသများသည် ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရန် အခက်ခဲဆုံးဒေသများဖြစ်သည်။ အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်မှသာ ပြည်သူများမှာ ဆင်းရဲမှုမှ လွတ်မြောက်စေမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်အား ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီ၏ ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကတိကဝတ်အား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် မေလတွင် တောင်စောင့်နတ်နန်းတောင်ကြားလမ်းတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် နောက်ဆုံး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည့် အသက် ၈၇ ခုနှစ်အရွယ် အဘိုးအို Chen Wen Chang ကွယ်လွန်ခဲ့ သည်။ မကွယ်လွန်မီ အဘိုးအိုအမြဲပြောကြားလေ့ရှိသော စကားတစ်ခွန်းမှာ နယ်စပ်ဒေသမှာမွေးရင် နယ်စပ်ဒေသကို ကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်သည် ။ အဘိုးအို Chen Wen Chang ၏ ဤရည်မှန်းချက်သည် “နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအား ချိတ်ဆက်ထားသည့်” Jiang Cheng တွင် တစ်ဆင့်ချင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။